I-White Pull Down Ikhishi Lompompi
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela phansi Izicucu / WOWOW White Donsela phansi Ikhishi ompompi
WOWOW White Donsela phansi Ikhishi ompompi
Ngabe ufuna i-ompompi ekhishini ephumelelayo kodwa elula ngokweqile? Uma uqinisekile, khona-ke ngokungangabazeki uthole isinqumo esifanele!
Le ompompi yasekhishini iyinto elula impela kepha enobungani kakhulu. Inomthunzi omhlophe we-matte futhi iza ne-Hardware elula kakhulu. Lo mklamo ocwengekile ulungele ngokweqile cishe isilinganiso ngasinye ekhishini nxazonke.
Le ompompi yasekhishini ine-spher gooseneck spout ephezulu. Le spout ingenza swivel eyengeziwe njengamazinga angama-360. Ngenxa yalokho, amanzi angafinyelela kusinki wakho ophelele. Lokhu kuzokhulisa ukunethezeka kwamakhasimende.
Umkhiqizo uzofakwa kalula futhi ngokungangabazeki intengo ye-oda lokuthenga. Ngaphezu kwalokho inomzimba olula futhi inobunzima obanele bokujikeleza kwamanzi.